Auto Fibo Taxana Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Auto Fibo Taxana Forex Tusiyaha
Auto Fibo Taxana Forex Tusiyaha
Auto Fibo Taxana Forex Tusiyaha isku daraa tilmaame fibonacci iyo khadadka arrimuhu xaqa ah labadaba sida magaca ku xusan. Waxaa auto, taasoo la micno ah in uusan ganacsade ah ma in ay dhex maraan dhaqdhaqaaqa ee aqoonsashada daqiiqado ah si ay u meel fibonacci iyo sidoo kale isku dayaya in ay aqoonsadaan meel ku fiican si ay u bilaabaan inay sawiraan khadad arrimuhu aad. tilmaame ayaa barbaro wax kasta oo aad loogu talagalay si toos ah marka fursad la siiyo baxdo ganacsade waqti sahlan lagu jiro ganacsi.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in ay template ama aan lahayn (si toos ah loo geliyay si ay template in ganacsade la isticmaalayo).
lagugu tuday sawirka.1. The template Auto Fibo Taxana Tusiyaha sharaxay.
Fig.2. The Auto Fibo Taxana Tusiyaha loo isticmaalo iyada oo aan ay template.
tilmaame waxay muujinaysaa heerka fibonacci waayo, ganacsade iyo bandhigayaa saddex lines arrimuhu. Khadadka Warku waa xariiqa huruuda muuqata shaxda ganacsiga ah.
Ka hor gelinayn wax on shaxda, tilmaame ugu horeysay tilmaamaysaa arrimuhu suuqa ee hadda oo halkaas ka dhigi karto oo dhan waxyaabo kale. Warku waa muujinaysaa by khadadka arrimuhu si wadajir ah ula channel in la sameeyo by khadadka buluug. Dhab ahaantii, wax walba oo kale dhacdo band this gudahood. Fibonacci waxaa laga soo hooseysa to top ee band ee downtrend iyo ka kor ilaa hoos for uptrend ah. line Warku waxaa loogu talagalay in ay soo jeedaan bar billow ah fibonacci ah.
line Warku inta badan waxay muujinaysaa isbeddello la soo dhaafay suuqa ka kuwaas oo waxaa loo raacin.
Just leh sharraxaad kooban ee la isticmaalayo Tilmaame fibonacci taas oo ah waxa ugu muhiimsan in la fahmo ka dib markii in la ogaado dhaqankan cusub ee suuqa kaas oo si sahal ah idiin siiyey inaad ku. First, fibonacci siinayaa heerka retracement ah, taas oo muujinaysa heerarka taas oo qiimaha suuqa gaadhi lahaa haddii ay jirto fursad ah loo raacin suuqa. heerarka Tani waxaa lagu muujiyey in boqolkiiba. Heerarka ugu weyn oo ugu macquul ah retracement waa 38.2, 50 iyo 61.8. Marka suuqa ka baxsan yihiin 61.8 heerka, suuqa in laga yaabo in oo kaliya bedelay arrimuhu iyo ganacsade ah waa in ay sugaan in ay arkaan in aan gaaro ka 100% heerka. The Auto Fibo Taxana Tusiyaha inta badan xoogga ku 38.2, 50 iyo 61.8 heerarka iyo isticmaalaa Saddexdaas in xitaa lala iman lahaa khadadka arrimuhu. heerarka retracement waxaa lagu tilmaamay in huruud garab kasta oo khadadka ay arrimuhu kala.
Waxyaabaha ah in la ogaado:
– The Auto Fibo Taxana Tusiyaha ka shaqaynaysa in ay ka faa'iideysato dabeecadaha furida suuqa ee. Tani waxa ay taasi qalab weyn oo loogu soo intraday iyo ganacsatada muddo dheer ah kaas oo ka baxo xirfadaha kale u shubmaan wakhti dheer qaar ka mid ah.
– Trading waa in la yareeyo inta u dhaxaysa 0 iyo 61.8 % oo ka mid ah heerarka retracement Fibonacci.
Sida loo meel amarada la isticmaalayo Auto Fibo Taxana Tusiyaha.
ganacsade waa in si fudud meel ganacsi mar fibonacci ah waxaa lagu sawiray. baddesho Si waxay leedahay in la sameeyo gudahood ah 0 iyo 23.6 heerka. Haddii aad u furo suuqa iyo heerka suuqa dhaafay heerka this, ganacsi ka dheeraw ku. Amarkan in la xiray markii qiimaha suuqa ku dhufan ka 61.8 heerka.
Haddii heerka fibonacci bilaabo top si hoose ka dibna ganacsade hubaal waa in gelinayn Xirfado iibiyay iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah tirooyin muujinaya sida loo dhigo amarada.
Fig.3. Saarid iibiyay a isticmaalayo Auto Fibo Taxana Tusiyaha.
Fig.4. Saarid si iibsan isticmaalayo Tilmaame Auto Fibo Taxana ah.
Auto Fibo Taxana Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Auto Fibo Taxana Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Auto Fibo Taxana Forex Indicator.mq4?
Download Auto Fibo Taxana Forex Indicator.mq4
Copy Auto Fibo Taxana Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Auto Fibo Taxana Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Auto Fibo Taxana Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Auto Fibo Taxana Forex Indicator.mq4 4 Chart?
Auto Fibo Taxana
article PreviousKain2 Forex Tusiyaha
Next articleQQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha